Inona ny "Malagasy te Hihena" ?
M. no anarako, vehivavy malagasy, 26 taona, izay leo ny fampijalian-tena ataon’ny vehivavy ny tenany amin’ny alalan’ny régimes.
Tianao ny hihena, hanena kibo, hanintona bebe kokoa ?
Fanirianao ny tsy hitombo intsony ?
Na nofinofinao ny hahavita hanao pataloha jean tsy mila mamela ny bokotra hivaha satria tsy mety mihidy intsony, mahasosotra anao ny voatery tsy mividy raha tsy leggings satria ireny ihany no elastika.
Mijanona izany miaraka amiko, ho entiko miaraka amiko ianareo mba hizarako ny fikako izay mampihena nefa tsy mety mitombo intsony nefa mahasalama ihany koa.
Efa hatrizay hatrizay, araka ny fahatadidiavako azy, rehefa te hihena dia manao régime foana. Nefa matetika, tsy vita ny miaritra hatramin’ny farany ary lasa mitombo indray avy eo, indraindray aza mihangeza kokoa noho ny teo aloha. Tsy mahatanty dia lasa mihinana izay rehetra hitan’ny maso. Ireny zava-mitranga ireny matetika dia vokatry ny fihetseham-po « ratsy » mahery loatra, toa ny alahelo, na koa hatezerana indraindray koa.
Miaraka amin’ny fikako, ho zaraiko aminareo ny antony izay mahatonga ny olona hiangeza mba hahafahana mamaha ny olana hatrany amin’ny fotony. Ary mba hahafahana manao izay tsy hitrangan’ny olana. Na koa mba tsy hamerenana ny hadisoana fanao hatrizay. Ho zaraiko ihany koa ny vokan-tsoa hafa azo avy amin’io fika io. Ireo vokan-tsoa ireo dia mety amin’ny lafiny ara-danja, ara-pahasalamana, na amin’ny fihetseham-po. Satria efa fantan-daza fa rehefa mahatsapa ny tenanao ho tsara tarehy sy manintona ianao dia falifaly be. Ary hamaranana azy, ho zaraiko ihany koa ny hadisoana rehetra izay nataoko tamin’ny hatanorako, rehefa izaho nitady izay rehetra azo hatao mba hahatratrarako ny tanjoko : hanana kibo fisaka. Mbola lamaody moa izany hatramin’izao ô ?
Tsoriko fa tsy samihafa aminareo aho. Tsy olona izay teraka niaraka amin’ny vatana mpilatro aho. Olona teraka tamin’ny fianakaviana izay be olona ngeza aho. Noheverin’ny ankabeazan’ny olona fa rahavavin-dreniko aho tamin’ny manodidin’ny faha-12 taonako, noho ny nahazoako 10kg tao anatin’ny 1 volana monja nanaovako fialan-tsasatra. Ahoana no nataoko ? Manirery aho tamin’izay, tsy nisy namana, sady tsy nisy fialam-bola. Nihinan-kanina izany sisa no mba nandaniako ny fotoanako.
Noho ny tonga teto Antananarivo, taorin’ny fialan-tsasatra, niova be aho : tsy antonina ahy intsony ny akanjoko taloha. Hany ka voatery nividy akanjo vaovao ho ahy ny ray aman-dreniko.
Nanomboka nanadala ahy ny ankizy tany am-pianarana. Soa ihany aloha fa tsy naharitra ela izany, nandritra ny 5 volana. Nefa vetivety dia nihangeza indray aho avy eo. Tsy maintsy nionona niaina tao anatin’iny vatana iny aho nandritra ny fotoana maro satria tamin’ny 12 taona izany, tsy mbola fantatro hoe inona no mampihena.
Tamin’ny manodidina ny faha-14 taona tany, nametraka tanjona vaovao aho : ny hiverina amin’ny bikako mahia toa ny tamin’ny faha-7 taonako tany. Raha ny tena marina, nilanja 45kg aho dia mirefy 1m52. Ie, fohy kely aho. Araka ny IMC-ako (Indice de Masse Corporelle) dia milanja « normal » aho. Fa tsy raisin’io tanatin’ny kajikajiny anefa ny fizarazaran’io lanja io amin’ny faritry ny vatako. Raha ny momba ahy izao, ny ankabeazan’izany tavy izany dia nandeha tany amin’ny kiboko sy ny takolako. Misy olona sasantsasany manodidina ahy izay tsy nahita ahy efa ela no nanontany ahy matetika hoe mitondra vohoka ve aho, mba hahazoanareo an-tsaina ny zava-nitranga. Ie, tamin’izaho mbola vao 14 taona monja.
Nanomboka nanao toa ny olon-drehetra amin’izay aho : nanomboka nanao régime.
Tamin’izany, tsy mbola nahalala ny tokony hatao aho. Ny hany mba haiko dia avy amin’ny sakafo no niandohan’ny olana. Nanomboka nijanona tanteraka tsy nisakafo in-3 isan’andro aho ary tsy mihinana raha tsy indray mandeha : amin’ny atoandro, mba hamerenana ny ohatra nomen’ny reniko ahy fahizay, tsy fanahy iniana, hatramin’ny fahakeliko. Nampijaliako ny vatako tamin’ny fiaretana ny hanohanana mandritra ny ora maro alohan’ny hihinanan-kanina. Vokan’izany : nisesika sakafo be dia be miohatra ny laniko in-3 isan’andro aho isaky ny amin’ny atoandro. Nitombo bebe kokoa noho ny tiako hihena aho. Najanoko haingana izany, mazava ho azy satria tsy zakan’ny vatako. Sady, tadidiko fa rarak’ivy toa ny alika be rora aho isaky ny mahita sakafo.
Taorian’izay, najanoko ny fifadian-kanina. Dia nanomboka nanao régime aho : « tsy mahazo mihinana zavatra tsara aho ». Efa fantam-poko, fatam-pirenena fa izay rehetra tsara dia na voararan’ny lalàna, na tsy mety ara-moraly, na mampatavy. Noho izany, najanoko ny fihinanana hena, satria, ho ahy manokana, tsara be ny hena. Najanoko tanteraka ihany koa ny fihinanana mofo, vary, paty. Raha fehezina, tsy nihinana raha tsy voankazo sy legioma manta aho in-2 isan’andro. Fa maninona no in-2 ? Tsy nisakafo aho raha tsy ny maraina sy ny atoandro tamin’ity indray mitoraka ity. Ary naharitra nandritra ny herinandro be izao. 5 andro raha tena marina.
Nanomboka nanandrana régimes maro hafa aho, izay rehetra reko tamin’ny manodidina ahy : régime poireau, régime mandritra ny 21 andro tsy mihinana sakafo ahazoana glucides (vary, paty, mofo, …), régime tambavy (volon-katsaka …), régime hyperprotéiné (be protéines), sns …
Mazava ho azy, nihena haingana aho nandritra ny 2 na 3 herinandro, nefa tsy nihena intsony aho taorian’izay. Sady isaky ny mijanona tsy miaritra intsony aho dia nihanatavy be foana.
Tonga tamin’ny faha-16 taonako amin’izay aho. Tsara anie izany hatanorana izany e ! Teo no nanombohan’ny fiarahana tamin’ny lehilahy. Nahagaga anefa fa tsy nanintona lehilahy maro aho. Tsy mitovy amin’ny namako iray izay « taille manequin », izay nanana ny hatsarana rehetra : tongotra manify tsara sady lava, kibo fisaka … « Vahana » hono io araka ny filazan’ny olona.
Mbola nitady vahaolana amin’ny « olako » ihany aho. Nahita karazana menaka mampahia amin’ny sakay ny reniko. Hosorana amin’ny faritra mila ahena izany menaka izany dia orina mandritra ny 15 minitra. Avy eo, maka sachet dia fonosina amin’iny ilay faitry ny vatana. Mila anaovana mandritra ny alina iray manontolo izany. Hafanana re izao e ! Toa ny nisy nandoro ny kiboko nefa tsy afaka nandositra. Tsy haiko hampitahana amin’ny hafa izany fahamaizana izany, « narary anie izaho iny e » ! Nihevitra izany izaho sy ny reniko tamin’izany fa nandaitra ilay izy.
Mazava ho azy, najanonay izany « fikoloam-batana » izany rehefa tapitra lany ilay menaka. Vokan’izany : tsy nisy fiovana akory, naharary tamin’ny tsy nisy antony.
Tadidiko ihany koa tamin’ny faha-22 taonako ny fanandramako ny tambavy. « Tambavy izay mampihena, tena mandaitra », ilay mpivarotra rahateo nandresy lahatra. Ilay tambavy io dia fangaron-dravinkazo izay nototoina dia natao anaty lamba kely manify toa ireny dite ireny. Ny pake iray izay misy dite 20 isa dia vidiana 10.000Ar hatramin’ny 12.000Ar. Ahoana no fampiasana azy ? Alatsaka anaty rano mangatsiaka ny dite iray mandritra ny 15 minitra ary sotroina iny ranony iny rehefa vao avy mifoha rehefa maraina, mbola tsy nisakafo. Raha ny tena marina, iny tambavy iny dia laxatif. Ho an’izay tsy mahalala, ny laxatif dia fanafody izay omena ny olona izay ampijalian’ny fitohanan’ny maloto (kaka) mba hampivalana azy. Ny fampiasana io karazana fanafody io nefa tsy mitohana akory dia tsy misy ilavana azy sady mety hisy voka-dratsiny amin’ny fahasalamana izay mety hifarana amin’ny cancer any amin’ny tsinay.
Avelako ho eritreretinareo hoe ahoana izany vehivavy izay mandeha miasa rehefa avy nihinana fanafody mampivalana izany. Marihiko etoana fa tsy nihinan-kanina betsaka akory aho tamin'io fotoana io, mbola nino ihany aho mantsy fa ratsy ny mihinan-kanina. Tsy azonareo an-tsaina ve ny zava-nitranga ?
Aleo izany ho tantaraiko anareo ny zava-nitranga raha izany : voalohany indrindra aloha, toa ny nanenoneno ny kiboko. Avy eo, toa ny misy rivotra be izany ao an-kiboko ao izay manery be ny vavoniko. Avy eo, mandeha mivalana isaky ny 15 minitra aho. Raha fehezina, mampijaly e ! Afa-baraka teo anivon’ny mpiara-miasa amiko sy ny lehibeko tany am-piasana aho noho ny fisotroana tambavy na thé minceur.
Tany amin’ny faha-24 taonako tany, nanapa-kevitra ny hanandrana hanao zumba aho, satria nalaza be izany teo anivon’ny vehivavy. Fanamarihana kely : tsy mankafy fanatanjahan-tena aho. Ny hany fanatanjahan-tena izay haritro dia ny milomano (izay tsy hataoko raha tsy in-2 na in-3 isan-taona). Nitady club fanaovana zumba aho ary nisy iray izay niteny ahy hoe 25.000Ar « monja » raha miaraka amin’ny namana ary 30.000Ar « monja » raha miaraka amin’ny be sy ny maro. Izay no vidin’ny fanaovana zumba indray mandeha. Marina aloha fa efa niasa efa 2 taona aho tamin’izay, fa tsy vitako ny handany ny hany kely mba nangoniko ho an’ny mariaziko mba hanaovana zumba INDRAY MANDEHA ihany. Sady ndrao bedin’ny fofombadiko amin’izany.
Nitady vidéos zumba ary aho tamin’ny Youtube. Ary nahita maro. Nalaiko izay nifanaraka tamin’ny tanjoko : « Fitness Flat Abs Workout ».
Noho ny tonga tany an-trano, novelomiko ny solosaina ary nanomboka nijery ilay vidéo aho, eo am-pipetrahana. Efa fanaoko ny mijery vidéos fotsiny aloha izay vao manaraka. Matetika, tsy arahako akory ilay izy satria tsy mahaliana ahy sady tsy mampazoto ahy.
Nijery an’ilay vidéo ary aho. Nanomboka tamin’ny fihetsika mora kely aloha : ahisaka mihiditra sy mivoaka ny tongotra. Fa ny tena nanintona ny masoko dia ny fampisehoana kibo hataon’ny tovovavy amin’ilay vidéo. Toa misy abdos daholo izy izany. Anefa ny hanana kibo fisaka no tanjoko fa tsy hanana muscles.
Najanoko ny fitsikerana nefa tsy manandrana akory. Nitsangana aho ary nanomboka nanandrana ilay fihetsika aho. Tsy arako ny fihetsika ataon’izy ireo. Fa notohizako ihany anefa noho ny fanantenana fa hahavita ihany. Dia very indray fa tsy naharaka e ! Fa ahoana no hanaovany an’io e ? Dia vita ny tapany voalohany amin’ilay vidéo nefa zara raha nihetsika akory aho. Kivy aho.
Nojereko ihany ny vidéo. Toa ny gymnastika manaraka rythme toa ny mandihy izy io. Karazana mouvement d’ensemble na ballet vaovao e ! Nefa, raha ho ahy manokana, raha te hanao an’io eo imason’olona, dia mila maharaka tsara sady mba mahay mandihy. Izany hoe, mila volana maro, mety ho taona mihitsy aza, aho mba hahazoako an’izany.
Raha fehezina : Tsara ny zumba, mampiasa hozatra am-pandihizana. Nefa tsy natao ho an’ny tovovavy toa ahy izay tsy mahay mandihy ary tsy maharaka ny fihetsika ataon’ny coachs haingana be.
Nitady vahaolana hafa aho, hatraiza hatraiza. Ary satria aho matoky bebe kokoa ny lojika dia namaky boky siantifika izay afaka mamaly ny fanontaniako aho :
Inona no mampatavy ?
Fa maninona aho no tsy mahavita mihena ?
Fa maninona aho no mihangeza haingana kokoa noho ny mihena ?
Fa maninona no mila manao sport na dia efa reraka foana ary aho rehefa hariva ny andro ?
Inona no tsiambarantelon’ireny olo-malaza ireny mba hahazoana vatana tsara bika ?
Inona no haniny ?
Fa maninona no tsy mety mihena intsony aho nefa tsy mihinana sakafo mampatavy intsony aho ?
Nanontany dokotera ihany koa aho mba hahitana ny vahaolana tena mety. Dokotera jeneralista telo no niresahako hatreto, satria tsy misy nutritioniste eto Madagasikara.
Nanomboka niasa mafy amin’izay ary aho. Nandramako daholo ny fika izay nangoniko. Ireo izay tsy nandaitra dia nahariko sy novaiko. Dia natambatro daholo ireo rehetra izay voavakiko sy reko, fa indrindra indrindra, izay nandramako, mba hanamboarako ny fikako. Nila andrana, hadisoana, ary fitsapatsapana nandritra ny 1 taona sy tapany mba hahavitana an’izany.
Fika izay sady mampihena no mahasalama izy io. Sady mahafalifaly.
Samy nahita ny fivoaran’ny vatako daholo ny manodidina ahy, ary maro no nanontany ahy hoe inona no nataoko, na hoe inona no régime nataoko …
Namorona pejy facebook ary aho mba hizarako aminareo ny niainako sy ny hany mba haiko. Avy eo aho namorona ito tranon-kala ito ho an'ireo izay te hahita ny mombamomba ny fanenana tena nefa tsy tia ny fikorontanan'ny torohevitra ao amin'ny facebook. Ary farany, boky telo (3) izay mamintina ny fikako.
Nefa indray andro, nahavaky boky aho izay nanova ny fomba fijeriko. Io boky io dia manome vahaolana amin'ny fanenana tena nefa tsy mila mampijaly tena amin'ny régime. Tsy maintsy novaiko daholo ary ny rehetra mba nahatongavako tamin'ito tranon-kala vaovao ito sy ny boky farany.
Nanapa-kevitra ny hizara ny fikako aho mba hanampiako ireo izay, toa ahy taloha, te hihena sady tsy te hihangeza intsony, na te hanena kibo, na sady tsy te hitombo no tsy te hihena intsony.
Satria samihafa avy isika, dia mila amboarina mba ho mety amin'ny iainanao ny torohevitra rehetra. Mba hahavitana izany, angatahana ianao mba hamaly ny fanontaniana rehetra amin'ny fahamarinana. Ary hanao ny enti-mody rehetra izay tokony hatao.
Avy aiza no niandohan'ito tranon-kala ito ?
Efa nisy pejy facebook iray izay hoe : "Maigrir Sur Mesure pour un Ventre Plat" noforoniko efa tamin'ny janoary 2014 tany. Tapa-kevitra ny hanova ny anaran'ilay pejy facebook ho teny malagasy anefa aho taty aoriana : "Te hihena nefa tsy mijaly? Aty jerena". Satria vitsy ny Malagasy izay nahazo izay torohevitra nomeko tao, sady maro rahateo koa no tsy nino ny maha-Malagasy ahy. Noho ilay torohevitra rehetra tamin'ny teny frantsay no anton'izany. Izaho rahateo tsy dia mahafehy ny tenin-drazantsika noho ny fanabeazana eto an-toerana izay manasongadina bebe kokoa ny teny avy any amin'ny reny malala. Sady mampiasa teny anglisy bebe kokoa aho miohatra ny tenin-drazantsika isan'andro.
Inona no tombon-tsoa ho azonao eto ?
Hozaraina ato amin'ito tranon-kala ito ny fahazarana ara-pisakafohanana sy fahazarana tokony hananan'ny tsirairay mba ho salama kokoa. Ny vokan-tsoa azo avy amin'izany dia ny fihenan'ny tavy ;)
Ahitanao torohevitra hafahafa sy mahatsikaiky mba hahafahanao manana bika tsaratsara kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ato.
Rehefa voafehinao izay voazara rehetra ato (aza matahotra fa ny fanombohany ihany no sarotra) dia hihena ny tavy amin'ny vatanao ary tsy tsy hitombo be intsony ianao.